N'ogbe 103/112 Series Custom Mere Design Thermal Break Aluminum Tilt and Turn Casement Window Manufacturer and Supplier |Deshion
103/112 Usoro Omenala Emere Kere Eke Aluminom Tilt ma tụgharịa Ohere Casement
Profaịlụ: High mma aluminum alloy profaịlụ, ọkpụrụkpụ 1.4-2.0mm Magburu onwe mma thermal ezumike aluminum profaịlụ, ọkpụrụkpụ 1.6-3.0mm PVC / UPVC ihe (mkpa ka e nyere iwu)
Agba: Enwere ike inye iwu White / Sliver / Grey / Champagne / Black / Osisi osisi / agba pụrụ iche
Ụdị iko: Single siri ike glazing 6mm / 8mm / 10mm / 12mm
glazing siri ike okpukpu abụọ: 5+12A+5mm/6+12A+6mm
Obere glazing: Green/Bule/Braw/Golden
Ndị ọzọ glazing: iko oyi kpọnwụrụ / kristal kristal / iko nka
Ntupu: Aluminom nche ntupu igwe anaghị agba nchara nche ntupu siri ike ígwè nche ntupu anwụnta net (Nylon, igwe anaghị agba nchara, Silicon carbide)
Akụrụngwa: German ika & Japan ika & China top ika
Ọgwụgwọ elu: Anodizing&Powder mkpuchi&Electrophoresis&Fluorocarbon agba
1. Nkwalite arụmọrụ ventilashion.Mgbe windo tụgharịrị n'ime, ime ime ụlọ nwere ike ị nweta ikuku ventilash nke ọma, na nke kachasị mkpa bụ na ọ gaghị afụ ahụ onye ahụ ozugbo, mgbanwe nke ime ụlọ na n'èzí na-adị ire ụtọ, dị mma ma dị ala.
2. Meziwanye nchekwa.Mgbe windo na-atụgharị, windo ahụ dị na steeti ventilashị na-emeghe, ma e jiri ya tụnyere nke dị n'èzí ma ọ bụ n'ime windo dị larịị, ọ dị oke nchebe ma nwee ụfọdụ ọrụ mgbochi izu ohi.
3. Ihe mkpuchi uzuzu na mmiri ozuzo.Mgbe windo dara n'ime, ikuku nke na-abanye n'ime ụlọ ahụ nwere ike ihu iko iji gbochie karịa ihe niile.N'ụbọchị mmiri ozuzo, ka mmiri ozuzo si n'elu na-ezo, a ga-egbochi ya na windo n'ihi ihe mgbochi iko dị n'ime windo.Enweghị nchekasị ọzọ maka mmiri ozuzo na-atụghị anya ya na-emebi arịa ụlọ, ala, wdg.
4. Mfe ihicha.Mgbe ị na-ehicha windo ahụ, ndị mmadụ na-emepe windo n'ime ya kpamkpam ma nwee ike ihicha ya ngwa ngwa.
Nke gara aga: Sistemụ windo ebe obibi nke Aluminom Windows Aluminom ahaziri ahazi
Osote: Sistemu mgbidi mkpuchi iko zuru oke na-ekpo ọkụ na-ekpuchi iko ihu iko China
Mgbaji ọkụ okpukpu abụọ nwere glazed Aluminom Casement W...